मलाई आरक्षण कोटाबाट पटक–पटक लड्नु छैन : बहादुर सिंह लामा - Ratopati
मलाई आरक्षण कोटाबाट पटक–पटक लड्नु छैन : बहादुर सिंह लामा
बहादुर सिंह लामा (तामाङ) दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा तत्कालिन एमाओवादी महासचिव पोष्टहादुर बोगटीलाई हराएर चर्चामा आए । २०४२ सालदेखि निरन्तर नेपाली कांग्रेसको राजनीति सक्रिय राजनीति गरिरहेका उनले १३ औं महाधिवेशनमार्फत कांग्रेसको केन्द्रिय सदस्यमा उम्मेद्वारी दिने घोषणा गरेका छन् । कांग्रेसभित्र इमान्दार र युवा नेताको छबि बनाएका उनीसँग रातोपाटीका लागि राजकुमार सिग्देलले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः
१३ औं महाधिवेशन नजिकिँदै छ, यहाँको तयारी के छ ?
नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशन राष्ट्रको चासोको विषय बनेको छ । नेपाली कांग्रेस ठूलो पार्टी भएको हैसियतले महाधिवेशनको तयारी भइरहेको छ । यो महाधिवेशनले के सन्देश दिँदैछ भन्ने पब्लिकले चासोका साथ हेरिरहेका छन् । देश संकटको अवस्थामा छ, भुकम्पले ठूलो जनधनको क्षती भयो । यो बीचमा ७० वर्षको प्रतिक्षापछि नेपाली कांग्रेसकै नेतृत्वमा संविधान जारी भएको छ । तर, संविधान जारी भएपनि मधेसमा समस्या उस्तै छ । यस्तो अवस्थामा कांग्रेसले कस्तो भूमिका खेल्छ, भन्ने आम नेपाली जनतामा चासो छ । यस्तो अवस्थामा महाधिवेशनबाट नेतृत्व परिवर्तनमात्रै गर्ने भन्दा पनि जनताको चाहना, आर्थिक समृद्धिलगायत विषयमा कसरी अघि पढ्ने भन्ने सबाल मुख्य हो ।
म नेपाली कांग्रेसको एक सिपाही हुँ । जहाँ मैले ४२ सालदेखि काम गर्दै आएँ । नेबिसंघबाट कांग्रेसको राजनीति गरेको म क्षेत्रिय सभापति हुँदै जिल्ला कमिटीसम्म आइपुगेँ । जिल्ला उपसभापति पनि भए भने ५४ सालमा गाबिस अध्यक्ष पनि । यसरी स्टेपबाई स्टेप गरि म तीन पटकसम्म महाधिवेशन महासमिति सदस्य पनि भएँ । नुवाकोट जिल्ला सभापतिमा लडेँपनि म थोरै भोटले पराजित भएको थिए । यसो त ०६४ को पहिलो संविधानसभा निर्वाचनमा नुवाकोट क्षेत्र नम्बर तीनबाट थोरै मतले पराजित भएँ । तर ०७० मा एमाओवादीका दिबंगत नेता पोष्टबहादुर बोगटीलाई भारी मत अन्तरले हराउँदै विजयी भएँ । मैले विजय प्राप्त गरेसँगै जनताको पक्षमा धेरै योजना बनाएको छु, काम गरेको छु । त्यही अनुसार नुवाकोटमा विकासले फड्को मारेको छ। पूर्वाधारको निर्माण प्रक्रिया पनि धेरै अघि बढेको छ । जनताको पक्षमा सकेजति काम गरिरहेकै बेला सबै साथीहरुले मलाई केन्द्रमा जान सुझाव दिनु भएको छ । सबैको सल्लाहबमोजिम आरक्षण कोटाबाट केन्द्रिय सदस्य पदमा चुनाव लड्दैछु ।
तपाई कांग्रेसका हस्तीहरु भएको जिल्लाको नेता हुनुहुन्छ । तपाईँको अगाडि चुनौतिहरु पनि होलान् नि ?
राजनीतिमा सबै कुराको चुनौति हुन्छन् नै । सबै कुराको सामना गर्दै जाने हो । चुनौतिको सामना गरेर नै म आफ्नो अस्तित्व कायम गर्न सफल भएको छु । मैले आफ्नो क्षेत्र, इलाका र भेगको लागि काम गरेको छ । उहाँहरुले सहयोग गर्नुभएको पनि छ ।
तपाईँलाई त बलियो दाबेदार हुँदाहुँदै जिल्ला सभापतिबाट पाखा लगाइयो भनिन्छ, केन्द्रमा पनि यही क्रम दोहोरिनसक्छ भन्नेहरु पनि छन् नि ?
हेर्नुस्, महाधिवेशनमा ७५ ओटा जिल्ला र २४० निर्वाचन क्षेत्रका प्रतिनिधिहरुको सहभागिता हुने हो । सबैले नेतृत्व परिवर्तन आवश्यक छ भनेर बुझिसक्नु भएको छ । को सक्षम छ, कसलाई नेतृत्वमा लैजानुपर्छ भन्ने उहाँहरुले उहाँहरु स्पष्ट हुनुहुन्छ । त्यसैले पनि मलाई अत्याधिक मत दिनुहुन्छ भन्ने मैले विस्वास लिएको छु ।
कांग्रेस केन्द्रिय सदस्य पदका लागि आकांक्षीहरु धेरै छन्, तपाईको दाबेदारीचाहिँ किन ?
राजनीतिमा आकांक्षा सबैको हुन्छ । ८ पढेपछि ९ कक्षा , ९ पछि १० कक्षा पढ्नुपर्छ भनेजस्तै राजनीतिमा पनि क्रमिकरुपमा माथिल्लो लेभलमा गएर जनताको पक्षमा काम गर्ने आकंक्षा हुन्छ । कांग्रेसको विधानअनुसार जनजातीहरुको लागि आरक्षण कोटाको व्यवस्था गरिएको हुन्छ, सोहि कोटामा म केन्द्रिय सदस्य पदमा लड्न लागेको हुँ । म तपाईमार्फत यो घोषणा गर्छु कि मलाई आरक्षण कोटाबाट पटक–पटक लड्नुछैन । एक पटक भन्दा दुई पटक लड्दिन । त्यसपछि खुल्ला प्रतिस्पर्धाको माध्यमबाट अघि बढ्नुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो । आरक्षणमा सँधै बसिरह्यो भने त्यो राम्रो पनि हुँदैन। वास्तवमा अहिले मलाई धेरै साथीहरु नचिन्न सक्नुहुन्छ , यो उपयोग गर्दा उहाँहरुले मलाई नजिकबाट चिन्न सक्नुहुन्छ ।
कुनै समुदायको प्रतिनिधित्व तथा सो समुदायको पार्टीमा अपनत्व बोध गराउन तथा नेपाली कांग्रेसलाई आकर्षक पार्टी बनाउन मेरो उम्मेद्वारी हो । म नेतृत्वमा आउन सक्दा तामाङ समुदायमा कांग्रेसप्रति सकारात्मक भाव पैदा हुन्छ । नुवाकोट, रसुवा, सिन्धुपाल्चोक धादिङ, काभ्रे, दोलखा लगायतका तामाङ बाहुल्य क्षेत्रका मानिसहरु पक्कैपनि आफ्नै मान्छे नेतृत्वमा पुग्न सकेको खण्डमा खुसी हुन्छन् । पार्टीप्रति अपनत्व बोध गर्छन् ।
मलाई आरक्षण कोटाबाट पटक–पटक लड्नुछैन । एक पटक भन्दा दुई पटक लड्दिन । त्यसपछि खुल्ला प्रतिस्पर्धाको माध्यमबाट अघि बढ्नुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो ।
कतिले मलाई कांग्रेसको यो अवस्थामा एकैपटक फुत्त आएको भन्छन्। त्यो बिल्कुल गलत हो । माथि पनि भने, म ४२ सालबाट नेबिसंघको राजनीतिहुँदै बिभिन्न आरोह अवरोह पार गर्दै यहाँसम्म आइपुगेको हुँ । र, पार्टीको लागि यति योगदान दिइसकेपछि अव जाने ठाउँ भनेको केन्द्र नै हो । यो पनि भन्न चाहन्छु कि म भन्दा उपयुक्त साथीहरु छन् भने म ठाउँ खाली गर्दिन पनि तयार छु । तर मैले जुन किसिमको काम गरेको छु, नेतृत्व गरेको छु । अनुभव बटुलेको छु , सोको आधारमा आफू दाबेदार देख्छु । जनजाती त्यसमा पनि विशेष गरि तामाङ समुदायको पार्टीमा नेतृत्व पनि भएको छैन यस्तो अवस्थामा कांग्रेस प्रतिनिधिहरुले सोच्नैपर्छ ।
तपाईले जनजातीको कुरा गर्नुभयो तर कतिपयले कांग्रेसलाई बाहुनहरुको पार्टी भन्छन्, तपाई जनजातीको बाहुनहरुको पार्टीमा भूमिका के ?
पहिला जनजाती र तामाङको प्रतिनिधित्व गर्ने भीमबहादुर तामाङ हुनुहुन्थ्यो। तर अब उहाँलाई समेत देखाउने ठाउँ नभएपछि मेरो उम्मेद्वारी आएको हो । तामाङको बाहुल्य भए ठाउँ छ, जनजातीको आरक्षण पनि भएको छ तर, प्रजातान्त्रिक व्यवस्थमा तामाङको मात्रै नभएर बाहुनहरुको पनि भोट चाहिन्छ । यो कुरा सबैले बुझ्नु भएको पनि छ ।
म भन्दा उपयुक्त साथीहरु छन् भने म ठाउँ खाली गर्दिन पनि तयार छु । तर मैले जुन किसिमको काम गरेको छु, नेतृत्व गरेको छु । अनुभव बटुलेको छु , सोको आधारमा आफू दाबेदार देख्छु ।
महाधिवेशनमा चर्को गुट छ, तपाईँचाहिँ कसको पक्षमा हुनुहुन्छ ?
पक्ष र विपक्ष भन्दा पनि नेतृत्व परिवर्तनको सबाल छ । हालै सुशील दा’को देहबासन भयो । अब पार्टी हाँक्न सक्ने मान्छेको खाँचो छ । यसका लागि को सक्षम छ भन्ने सबालनै मुख्य हो । अधिकांश साथीहरुले कसलाई नेतृत्वमा ल्याउने भन्ने पनि बुझिसकेका छन् । अहिले मैदानमा शेरबहादुर देउवा र रामचन्द्र पौडेल देखिनुभएको छ । शेरबहादुर देउवा धेरै पटक प्रधानमन्त्री भइसक्नु भएको छ । पार्टी हाक्ने क्षमता पनि छ । यस्तै रामचन्द्र पौडेल पनि आदरणीय नेता हुनुहुन्छ । सबै साथीहरुले जस्तै म पनि पार्टी हाँक्न सक्नेलाई सघाउँछु ।
तपाई एक युवा नेता पनि हुनुहुन्छ, जनजातीलाई जस्तै युवालाई पनि कांग्रेसले स्थान नदिएको हो ?
केहि पहिले मात्रै एक मित्रले मलाई सोध्नुभएको थियो–होइन तपाईलाई कांग्रेसले कसरी चुनाव लड्न टिकट दियो ? (हाँस्दै) ६० वर्षसम्म हाम्रो पार्टीमा युवा हुन्छ । बाउआमाले जहिले पनि छोरालाई बच्चै देख्छ । नेपाली कांग्रेसमा ७०–८० वर्षसम्म पनि नेतृत्वमा रहिरहने विगतले नै देखाउँछ । यो कारणले पनि युवाहरुलाई स्थान खाली हुनै सकेन। त्यही कारणले गर्दा पनि ६० वर्षबित्दा समेत युवा भनिने गरिएको छ । यसका लागि कुनै क्राइट एरिया तोकिएको छैन । तर पछिल्लो समय युवा सहभागिता बढेको चाहिँ साँचो हो ।
युवाको सबालमा यो महाधिवेशनबाट के अपेक्षा गर्न सकिन्छ ?
अहिले महाधिवेशन प्रतिनिधिहरु चुनिएर आउनु भएको छ, जसमा युवा सहभागिता बढेको छ । उनीहरुले कांग्रेसलाई बुझेका पनि छन् । र, उहाँहरुले युवालाई अघि बढाउन महत्वपूूर्ण भूमिका खेल्नुपर्छ भन्ने म ठान्दछु । उहाँहरुको निर्णयले नै यो महाधिवेशनबाट हुने युवा सहभागिताको टुंगो लाग्दछ ।
कांग्रेसमा विधानको तीब्र उलंघन हुने गरेको छ, यसरी विधान उलंघन हुने पार्टीको तपाई केन्द्रिय सदस्यमा निर्वाचित हुनुभयो भने के परिवर्तन गर्न सक्नुहुन्छ ?
स्पष्टै छ , त्यही भएर त अहिले नेतृत्व परिवर्तनको सवाल उठेको छ । पार्टीलाई सहि दिशा दिन, विधान अनुसार अघि बढ्न, संगठन चुस्त दुरुस्त राख्न नेतृत्व परिवर्तनको जरुरी भएको हो । यसो हुन सकेको अवस्थामा कुनै समस्या रहँदैन। म निर्वाचित हुन सकेको खण्डनमा विधानमात्रै नभएर पार्टीलाई अझैं जनतामुखि बनाउन सशक्त भूमिका निर्वाह गर्छु, यो सबैलाई विस्वास दिलाउन पनि चाहन्छु ।
कांग्रेसका गाउँदेखि जिल्ला अधिवेशनसम्म पैसा र पहुँच हुनेहरुले चुनाव जिते भन्ने चर्चा छ जुन केन्द्रमा पनि दोहोरिन्छ भन्नेहरु पनि छन् नि ?
पैसा एक साधन हो साध्य होइन । यस्तो हो भने पैसावाल मारबाडीहरुले किन जितिरहेका छैन त ? एकाध केसमा यस्तो हुन पनि सक्छ तर बास्तवमा चुनाव चित्ने भनेको उसको लगनशीलता, संगठन, काम र योगदानकै आधारमा हो । पैसाले माथि आएको भन्ने जुन आरोप छ त्यो निराधार हो । अब झिना मसिना कुराहरुलाई बिर्सेर आर्थिक क्रान्तितिर लाग्नुपर्छ । अहिले राजनीतिक क्रान्ति भइसकेको जस्तो लाग्छ, राजनीतिक क्रान्तिले मात्रै देशको विकास सम्भव हुने होइन, आर्थिक क्रान्ति नै अहिलेको आवश्यकता हो ।
कांग्रेसलाई धनाड्यहरुको पार्टी भनिन्छ, यो पार्टीलाई जनताको पार्टीचाहिँ कसरी बनाउनु हुन्छ ?
कृष्णप्रसाद भट्टराईले के लिएर जानुभयो ? उहाँ कति सरल र निष्ठाको राजनीतिक गर्नुहुन्थ्यो । वीपी, सुशील दा’हरुले पनि त्यस्तै निष्ठाको राजनीति गर्नुभयो । पार्टीमा केहि धनाड्यहरु पनि हुनसक्छन् तर त्यो भन्दैमा धनाड्यको पार्टी भनिहाल्न मिल्दैन । बरु कांग्रेस भन्दा त अरु पार्टी नै धनाड्य छन् नि ! ति धनाड्य पार्टीहरु गरीब र दुखीहरुको पार्टी हुम् भनेर बखान गर्न थाक्दैनन् । तर, गरीबको थिचोमिचो गर्छन् उनीहरु नै । गरीबको थिचोमिचो गरेर गरीब पार्टी हु भन्न सुहाउँछ ? हामी त खुल्ला छौं । स्वतन्त्रताको पक्षमा छौं । तपाईलाई यो पनि भनौं, वर्षौ वितिसक्दा एउटा राम्रो पार्टी कार्यालय निर्माण गर्न समेत कांग्रेसले सकेको छैन । तर अरु कम्युनिष्ट पार्टीहरुले सरकारमा गएको नौं महिना पुगेको छैन, पार्टी कार्यालय ठड्याइसकेका हुन्छन् ।
कतिले मलाई कांग्रेसको यो अवस्थामा एकैपटक फुत्त आएको भन्छन्। त्यो बिल्कुल गलत हो ।
७०–८० वर्षसम्म पनि नेतृत्वमा रहिरहने विगतले नै युवाहरुलाई स्थान खाली हुन सकेन।
राजनीतिक क्रान्ति भयो अव आर्थिक क्रान्तिमा जोड दिनुपर्छ
नेपाली जनताले राम्ररी बुझसकेका कि कुन पार्टीले राम्रो गर्न सक्छ कसले गफमात्रै दिन्छ भन्ने । नेपाली कांग्रेसले प्रजातन्त्रप्रति राखेको स्पष्ट अडानमाथि जनता प्रष्ट छन् । सोहि कारण जनताले विगतमा पनि विस्वास गरेकै हुन् र आगामी दिनमा पनि गर्नेछन् । यसमाथि आगामी नेतृत्वले जनताको पक्षमा धेरैभन्दा धेरै काम गर्नेछ । त्यसकारण पनि जनताले नेपाली कांग्रेसलाई ठूलो पार्टी, राम्रो पार्टी बनाउने छन् भने
१३ औं महाधिवेशनमा जनजाती कोटाबाट केन्द्रिय सदस्यमा उम्मेद्वारी दिँदैछु । जिल्ला सभापति , क्षेत्रीय सभापति, महासमिति, महाधिवेशन प्रतिनिधि साथीहरुलाई के आग्रह गर्न चाहन्छु भने जनजातीको छोरो मैले उम्मेद्वारी दिन लागेको सन्दर्भमा मलाई एक पटक सहयोग गर्न आग्रह गर्दछु । हुनत म भन्दा योग्य कोहि भएको खण्डमा अरु नै नेतृत्वमा आएपनिकेहि फरक पदैन तर नेपाली कांग्रेसमा लामो समय खर्च गरेको छु । गाबिस अध्यक्षदेखि जिल्लाको सबै तह र तप्कासम्म काम गर्नुको साथै संविधान निर्माण प्रक्रियामा समेत सामेल भएको छु । मेरो योगदानलाई उहाँहरुले मूल्यांकन गर्नुहुन्छ भन्ने मैले ठानेको पनि छु ।